Carlos Ruiz Zafón: kushingirira kwemweya kuburikidza netsamba | Zvazvino Zvinyorwa
Carlos Ruiz Zafón aive mumwe wevanyori vakakurumbira venguva yeXNUMXst century Hazvina maturo iye anotorwa semumwe wevanonyanya kuverengerwa vanyori venhau munyika, chete mushure meCervantes; izvi nekuda kwebasa rake rakatanhamara: Mumvuri wemhepo (2001). Iyi nganonyorwa yakabata basa remunyori uye yakatsanangurwa nevatsoropodzi se:
Munyori wenhau aive nemaitiro ake, maakaunza pamwechete dzakasiyana zvinyorwa. Akatora muzvisikwa zvake hunhu hwakaisvonaka hwakagadzirwa chidimbu chega chega en chimwe chinhu chakasiyana uye chisingaenzaniswi. Muhupenyu hwake hwese mabasa ake akashandurwa mumitauro yakawanda, nawo yakakwanisa kukunda vaverengi vanopfuura mamirioni makumi maviri nemashanu, uyo aigara achitarisira nyaya dzake dzinoshamisa.
1 Dhiyabhorosi dhata
1.1 Kutanga kudzidza uye matanho ekunyora
1.2 Zvidzidzo zveYunivhesiti uye ruzivo rwehunyanzvi
2.1 Kufa kwekutanga
2.2 Novels naCarlos Ruiz Zafón
3 Mamwe mabhuku naCarlos Ruiz Zafón
3.1 Muchinda weMist (1993)
3.2 Navy (1999)
3.3 Mumvuri weMhepo (2001)
NeChishanu Gunyana 25, 1964, guta reBarcelona rakaona kuzvarwa kwaCarlos Ruiz Zafón. Boka remhuri yake raiumbwa nababa vake, Justo Ruiz Vigo, mumiriri weinishuwarenzi; amai vake, Fina Zafón, nemukoma wake, Javier. Sezvo aive achiri mudiki, airatidza kushevedzera semunyori uye fungidziro huru. Uchapupu hweiyi yaive matatu-mapeji enhau aakanyora panguva yehudiki hwake, aine madingindira ekutyisa uye maMartian.
Kutanga kudzidza uye matanho ekunyora
Akapedza zvidzidzo zvake zvekutanga kukoreji yeJesuit: San Ignacio de Sarrià, chimiro chakakurudzira hukama hwake nemaGothic maitiro. Pazera remakore gumi nemashanu, akapedza bhuku remapeji mazana matanhatu zvichibva pane zvakavanzika zveVictorian: Iyo Harlequin Labyrinth. Zvinyorwa zvakatumirwa kune vakaparadzira vakasiyana siyana, asi hazvina kuburitswa. Kubva pane chiitiko ichocho, akagamuchira zano rakakosha kubva kumupepeti weEdhasa: Francisco Porrúa.
Zvidzidzo zveYunivhesiti uye ruzivo rwehunyanzvi
Akapinda Autonomous University yeBarcelona kudzidza Ruzivo Sayenzi. Paaipinda mugore rake rekutanga rezvidzidzo, akanyorera kunoshanda kumasangano akasiyana siyana ekushambadzira. Akakwanisa kubhadharwa na Dayax, kwaakasimuka kubva kune mupiro kuva munyori wemakopi. Gare gare, yakashanda nemamwe masangano akakosha, akadai se: Ogilvy, Tandem / DDB y Mc Cann Nyika Boka.
Mu 1992, Ruiz Zafón akafunga kurega basa kubva kunhandare uye azvitsaurire zvizere kumabhuku. A) Hongu akatanga kunyora chakavanzika uye fungidziro inoverengeka, iyo yakaguma gore rakatevera: Muchinda weMist. Pane kurudziro yemusikana wake, akamuisa kumakwikwi yemabhuku vechidiki kubva kumubudisi Edebé, iyo yakakunda. Pamwe chete nemubairo, akagashira yaive mari hombe yenguva yacho.
Munyori akafunga kuisa mari yemubhadharo mukutsvaga zvimwe zvaaifarira, iyo cinema, saka akatamira kuguta reLos Angeles. Paunenge wakagara ipapo, akatanga kunyora zvinyorwa, Asina kusiya kugadzirwa kwemanovel ake. Nguva pfupi yapfuura, akaburitsa akateerana ebasa rake rekutanga: Muzinda wepakati pehusiku (1994) uye Mwenje yaSeptember (gumi nemapfumbamwe nemapfumbamwe nemashanu); kuitira kuti upedze iyo Fog Trilogy.
Muna 1999, akapa Marina, Novel inotsanangurwa nemunyori se: “… iye wepamoyo pane ese mabasa ake". Kwapera gore, akafunga kubheja pane veruzhinji vanhu uye akatanga iyo tetralogy Makuva emabhuku akakanganwa, pamwe nekubudiswa kwe Mumvuri wemhepo (2001). Nokukurumidza, basa racho rakatengesa anopfuura mamirioni gumi nemashanu yemakopi, ayo akasimbisa basa reSpanish.
Carlos Ruiz Zafon akafa muna Chikumi 19, 2020 muLos Angeles (USA), pazera remakore makumi mashanu nemashanu uye mushure mekurwa kwemakore maviri nekenza yekoloni.
Novels naCarlos Ruiz Zafón
Muchinda weMist (1993)
Muzinda wepakati pehusiku (1994)
Mwenje yaSeptember (1995)
Mamwe mabhuku naCarlos Ruiz Zafón
Muzhizha ra1943, mugadziri Maximilian muvezi le anozivisa mudzimai wake Andrea nevanakomana vake -Alicia, Irina naMax-- kuti vachafamba kunzvimbo pamahombekombe eAtlantic, kuitira kuvadzivirira kubva kuhondo. Max haasi kufara nesarudzo iyi, sezvo iye asingade kubva pamba pake. Husiku hwakatangira kuenda, baba vake vanokwanisa kumufadza mushure mekumupa wachi yesirivheri yezuva rake rekuzvarwa.
Munguva yerwendo, Maximilian anotanga kuudza vana vake nhoroondo yeimba, iyo ine rima rapfuura. Kare kare, mwanakomana wevaimbova varidzi akange anyura uye akafa mune zvisinganzwisisike mamiriro. Mushure merwendo rurefu, maCarvers vanosvika pamba pavo nyowani, inzvimbo isinganzwisisike uye guruva nekuda kwenguva refu mukusashandiswa; pakarepo, vanotanga kusunungura.
Pamwe chete, nhengo dzemhuri dzinobatsira nekuchenesa, dzichivasiya vaneta. Mushure mekuzorora zvishoma, Max, ane njere kwazvo uye asingatyi, inotanga kucherechedza zvisinganzwisisike uye zvinokanganisa zvinhu. Kubva ipapo, uyu murume wechidiki rarama nguva dzakaoma patinosangana nemunhu akaipa: Muchinda wemhute, anopa zvishuwo, asi nemutengo wakakwira kwazvo.
Muchinda weMist ...
Oscar Drai anodzokera kuBarcelona mushure memakore mazhinji ekurarama achitambudzwa nezvakaitika kare, ndipo paanofunga kutanga kutaura nyaya yake. Izvo zvese zvakaitika aine 15 makore uye akatiza kubva kuboarding chikoro kuti apinde mutown. Kuda kuziva kwakamutungamira kuti apinde mune imwe imba yekare muSarriá, kwaakawana wachi yekare yehomwe, iyo yaakaenda nayo apo aifanira kubva nekuchimbidza.
Oscar, achitya, anofunga kudzoka kuzodzosera chinhu, asi anoshamisika naMarina, uyo anomutora nababa vake Germán. Anobvuma ruregerero rwejaya iri nekutora wachi. Mushure mekukurukurirana, vakomana vanosangana kuti vafambe mumigwagwa yeBarcelona, ​​uye nokudaro vazivane zvirinani. Zuva rakatevera, Marina anotora Oscar kuenda kumakuva, kwaanomuratidza rimwe guva.
Guva rine guva reguva rine shavisha nhema nhema, hapana zita. Iyo niche ndeye yakashanyirwa kamwe chete pamwedzi nemukadzi anonzwisisa, uyo anongosiya ruva dzvuku. Vanoshamiswa, vechidiki vanoferefeta mamiriro akashata aya, anovatungamira kune yekare indasitiri yekugadzira yekugadzira. Ikoko vanowana zvakavanzika zvinotyisa zvakapoteredza muridzi wefekitori: Mikhail Kolvenik.
Rwendo runotyisa rwunovatungamira kuti vabatanidzwe mune yakaipa nyaya, zvine njodzi zvakanyanya uye izvo zvinozoratidzira marongero avo nekusingaperi.
Marina (Raibhurari Carlos ...
Mune yakanyarara Barcelona mushure mekupera kwemauto ehondo, murume wechidiki Daniel Sempere anofamba akabatana ruoko nababa vake toward nzvimbo isinganzwisisike. Uyu anozvitora kumakuva emabhuku akakanganwa. ndipo paanotaura sarudza bhuku, izvo ichafanirwa kutora hanya senge ipfuma. Achifarira, Daniel anosarudza chinyorwa chinonzi Mumvuri wemhepo, yakanyorwa naJulián Carax.
Pandinosvika kumba, nekukurumidza verenga bhuku uye tsanangudzwa nenyaya yacho, saka anosarudza kutsvaga rumwe ruzivo nezve munyori, asi hapana kana munhu anomuziva. Munguva pfupi, anomhanyira muLaín Coubert, murume asinganzwisisike uyo anoda kuparadza ese mabasa eKarax. Ichi chisinga zivikanwe chinoita zvese zvinobvira kuwana kopi yaDaniel.
Mushure mekuenderera mberi nekuferefeta, Danieri anobatanidzwa mune tangle enigmas inotenderedza munyori. Kubva ipapo —pakati pezvakare nezvazvino— vatambi vanoverengeka vanobatanidzwa muchakavanzika vanotanga kuoneka. Senge kunge zvidimbu zve dambanemazwi, nyaya dzese dzinokwana zvakakwana vakakwira pakupedzisira gadzirisa zvose unyengeri kutenderedza zano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Biography » Carlos Ruiz Zafón: mabhuku
Mabhuku aJJ Benítez